* Light Of Myanmar *: ခေါင်းဆောင်အသစ်ရှာကျပါ
Posted by * In Search of Truth * at 2:42 PM
ိလာလည်ပါတယ်ဗျာ.. အစ်ကိုရဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကို လည်း စတ်ဝင်တစား ဖတ်သွားပါတယ် .. အပြီးတော့ မဖတ်နိုင်ပါ.. ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ ဖတ်သွားတော့မယ်ခင်ဗျ .. အဆင်ပြေပါစေဗျာ...
ထိထိမိမိရှိတဲ့ အတွေးခေါ်တစ်ခုပါပဲ။ လက်တွေ့ဖြစ်နေတာတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရစေပါတယ်။ ဆက်လက်ရေးသားပါဦး ကိုဇော်မျိုး။ အားပေးလျက်ပါ။
ဒါကတော့ ဒီနေ့ညနေမှာတွေ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီသမားတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံကို ဝေဖန်ထားတာပါ။ ကိုဇော်မျိုးအချိန်ရရင် ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ လေသံကတော့ အနည်းငယ်မာသွားမယ်ထင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ နစ်နေမန်း ကိုဦးတည်ပြီးရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မဆိုင်သူများမပါဝင်ပါ။ ဦးတည်သူထံ အရောက်ပို့ပေးကြဖို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးပါပဲ။
ဒီမှာ PDF ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဒ်ချနိုင်ပါတယ်။
Ko Zaw Myo your bolg do not itself has democracy. You are like junta. Why you dislike DASSK? At present she isaonly one domestically and internationally officially recognised figurehead for our Myanmar democracy people. You think you are so smart justawriting some lines from USA (democracy country). Yes of course some of your facts are as far as practicable to accept and practise by anti-democracy groups. Ko Zaw Myo I felt that you too asloabrick andagrains of sand whenever come to context of democracy building. Be stay healthy.
သင်၏ အကြံပြုချက်များသည် သာမာန် (တကယ့်ကို သာမာန်သာဖြစ်၏) အရာရာကို မျက်စိပိတ်နားပိတ်ကာ တယူသန် ထိုင်အပြစ်ပြောကာ ဘာမှမလုပ်သူများနှင့် ဆန့်ကျင်လျှက် များစွာ လက်တွေ့လှုပ်ရှားမှုဘက်ကို အားသာသည်ကို ကျွန်တော်လေ့လာမိပါသည်.. သို့သော် ယခုကိစ္စသည်မူ စိတ်ကူးယဉ်မှုများပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန် ခက်လှပါသေးသည်ဟု ဝေဖန်ချင်ပါသည်.. ထိုခေါင်းဆောင်အား ဤမျှကွဲပြားနေသည့် အဖွဲ့များအကြားမည်သို့ တင်မြှောက်မည်နည်း.. လက်ရှိအဖွဲ့များတွင်ပင် နေရာလုနေကြသူများသည် မည်သို့တညီတညွတ်တည်း ပေါင်းစည်းမိကြမည်နည်း...
အမှန်တော့ ကိုယ်နည်းကိုယ့်ဟန်နှင့် ဆန့်ကျင်ကြပါသည်ဆိုသည့် အဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံသည် မည်သို့မျှ ပေါင်းစည်းမရအောင် ကွဲပြဲခြေပုန်းခုတ် ဘတ်ဂျတ်လုနေကြသူများဖြစ်ပြီး လူကြားကောင်းအောင် အမြင်မတူပါဟု အော်နေခြင်းမျှသာဖြစ်၏။ ထိုအရာကို မည်သည့်ဒီမိုကရေစီသမားမျှလည်း ပွင့်လင်းရဲရင့်စွာ ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိ၊ ထောက်ပြခြင်းမရှိပဲ တအုံနွေးနွေးကိုယ်ထင်ရာကိုယ်စိုင်းနေကြသူများသည် မည်ကဲ့သို့ ထိရောက်သော အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကို စနစ်တကျတည်ထောင်နိုင်ပါမည်နည်း..
အဓိကသည်စိတ်ဓါတ်သာဖြစ်သည်.. ထိုကြောင့် လက်တွေ့တွင်သုံးချရန်မဖြစ်နိုင်သော ဆောင်းပါးဟု သင်၏ယခုဆောင်းပါးအား ဝေဖန်ချက်ပြုပါသည်.
I haveafew points to ask and tell you.
1) Why do you hate DASSK?
(Do you think because of DASSK, burma is not improving or she is incapable to achieve democracy? then who else can do even up to her enduring struggle? Or simply personal envy and jealousy?)
2) Please do not write very skewed view of democracy. Otherwise, you will beaburmese version of David Irving (disgraced Holocast denier historian).
3) Thanks for your time for thinking about how to improve burma and bravo to your perseverance through criticisms (though I do not know your true motives and wish for sincereness).
ယနေ့သည်(၈၇) နှစ်မြောက်အမျိုးသားနေ့ ဖြစ်သည်။မြန်မာပြည်သားများခင်ဗျာ မိမိတိုင်းပြည်အပေါ်တကယ်စေနာရှိတယ်.. မေတ္တာရှိတယ်ဆိုရင် စစ်မှန်သောအမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား ဆန့်ကျင်ကြပါရန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တတ်စွမ်းသမျှလုပ်နေကြတဲ့ သူတွေတော်တော်များများဟာ နအဖမကောင်းကြောင်း ပြောနေတာနဲ့ အချိန်ကုန်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နအဖကလဲ ကောင်းတာပြောစရာတစ်ခုမှ မရှိလောက်အောင်ကို ဆိုးတယ်လို့ပြောရင် ကျနော်လွန်မယ်မထင်ဘူး။ တိုင်းပြည်အတွင်း ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်ကားရေးအတွက် လက်တွေ့ကျတဲ့ အလုပ်တွေအခုထက်ထိ စပြီးမလုပ်ကြသေးဘူး၊ မစဉ်းစားကြသေးဘူး လို့ပြောရင်တော့ မှားမယ်ထင်တယ်။
ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တတ်စွမ်းသမျှလုပ်နေကြတဲ့ အပိုင်းမှာ မီဒီယာအရ တိုက်ခိုက်တာရှိမယ၊် နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတောင်းခံတာရှိမယ်၊ စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်တာရှိမယ်။ ထိရောက်မှုရှိချင်ရှိမယ် မရှိတဲ့အခါတွေလဲရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေကို လက်တွေ့ကျတဲ့အလုပ်တွေပဲလို့ ကျနော်မြင်တယ်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးအတွက် ဘယ်လိုလက်တွေ့ ကျတဲ့ အလုပ်မျိုးတွေကိုဇော်မျိုးက ဒီမိုကရေစီသမားတွေကိုလုပ်စေချင်တာလဲ?
ကျနော့အမြင်နဲ့ လုပ်စေချင်တဲ့ အလုပ်တွေကတော့ရိုးရိုးလေးပါ။ တကယ်လဲလုပ်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ တကယ် မသိရင်ပြောပြမယ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘယ်လောက်ထိ ဆိုးသွမ်း ပျက်စီးနေတာလဲဆိုတာကို မြန်မာ့ရုပ်သံနဲ့ သတင်းစာတွေ ကိုကျော်ပြီး ပြည်သူတွေကိုသိအောင် လုပ်ရမယ်။ ဆိုးရွားနမ့်ကျနေတဲ့ ပညာရေးနဲ့ သာမန်ပြည်သူတွေရဲ့အသိဥာဏ်ကို ပညာပေးရမယ်။ လူကိုလူလိုဆက်ဆံ လေးစားခြင်း၊ လူသားတစ်ယောက် လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံ၊ လူတစ်ယောက်ရဲ့ရှိနေပြီးသား ရပိုင်ခွင့်တွေ (လူ့အခွင့်အရေး)၊ တွေကိုသိအောင်၊ နားလည်လာအောင် တွေးခေါ်မြင်တတ်အောင်၊ လုပ်ရမယ်။ အဓိက ကတော့စာမဖတ်တတ်တဲ့ ဆိုးကျိုးပေါ့ဗျာ။ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတယ် ကျောင်းစရိတ် ကြီးတယ် ကျောင်းမနေနိုင်တာက အစ။
နိုင်ငံတစ်ကာအကူအညီတောင်းခံရမယ်၊ ကမ္ဘာနိုင်ငံသားတွေသိအောင်လုပ်ရမယ် ပြည်တွင်း သတင်းအမှန်တွေယူရမယ်။ ဒါမီဒီယာအပိုင်းရဲ့ အလုပ်အနည်းအကျင်း။
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာဘာလဲ ဘာကြောင့် ကောင်းတာလဲ၊ လွပ်လပ်ခွင့်တွေကို ဘယ်လိုတိုက်ယူရမလဲ၊ တောင်းယူရမလဲ သိအောင်သတင်းတွေဖြန့်မယ် လှုပ်ရှားမယ် (ကိုဇော်မျိုးကိုယ်တိုင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အသေချာနားလည် သဘောမပေါက်သေးဘူးလို့ ကျနော်မြင်တယ်) လာတ်စားနေမှုတွေ ခေါင်းပုံဖြတ် မတရားမှုတွေ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ သပိတ်မှောက်မယ် ညီညွတ်ကြမယ်၊ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလုပ်နိုင်ကြပြီး ဆိုရင် ထိရောက်နိုင်ပါတယ်
အောက်ခြေပိုင်း စစ်သားတွေရဲ့ ရွာတွေကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေ မသိနားမလည်ကြတဲ့ အပြစ်မဲ့ တောတောင် တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက် ကျန်းမာရေး ပညားရေး လုံခြုံရေး။ သတင်းတွေ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ စစ်ရေးအရ လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။
စစ်တပ်ရဲ့ ကမ်းကုန်အောင် ရက်စက် မှုတွေကို သတင်းတွေက ကျနော့ကို ဆိုက်ဝါးလုပ် ထားတယ်လို့ မပြောပါနဲ့။ တွေ့ ကြုံဖူသူတိုင်းသိတယ်။
ဒါတွေဟာစိတ်ကူးယာဉ်သက်သက်မဟုတ်ဘူး၊ နားထောင်ကောင်းအောင် လျှောက်ရေးနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုဇော်မျိုးနားလည်ပါတယ် ကိုဇော်မျိုး ဟာစဉ်းစားတွေခေါ်တတ်တဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်လို့ကျနော်ခံယူထားတယ်။
ကိုဇော်မျိုးပြောတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက တကယ့်အခြေအနေ အဖြစ် အမှန်တွေကို ကိုဇော်မျိုးကိုယ်တိုင်တောင် မသိဘူးလို့ပြောရင် ကိုဇော်မျိုးလက်ခံမလား?
ဘယ်အရာတစ်ခုမှ မစဉ်းစားပဲ မတွေးတောပဲ မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ ကိုဇော်မျိုးသိပါတယ်။ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ စဉ်းစား တွေခေါ် စိတ်ကူး ပြီးတော့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကိုလုပ်ကြရတာပဲ။
ကိုဇော်မျိုးရဲ့ ခေါင်းဆောင်အသစ်ရှာတဲ့ နည်းကို စိတ်ကူးယာဉ်ဆန်တယ်လို့ ကျနော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ဝေဖန်ပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ကိုဇော်မျိုး ကျနော့အမြင်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် နောက်အချိန်ရရင် ဆွေးနွေးပါ့မယ်
နိုင်ငံကြီးတွေကိုမုန်းတဲ့ ကိုဇော်မျိုးကိုကျနော်အပြစ်မပြောပါဘူး။ မုန်းနေတဲ့သူတွေအများကြီး ကိုဇော်မျိုးတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာရင်လဲ သူတို့ဆီမှာလဲခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ရှိတယ်။ ကျနော့ဆီမှာလဲ ဘာကြောင့် နှစ်သက်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်
ကိုဇော်မျိုးပြောတဲ့ စိတ်ကူးယာဉ် သက်သက် တိုးတက်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အ၀ ရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးဆိုအပြင်မှာတကယ်ရှိတယ် ဆိုတာသိစေချင်တယ်။ စာရွက်ပေါ်က ဥပဒေ တွေ ပြဌာန်းချက်တွေ ဟာလက်တွေ့လူ့လောကမှာ လုံးဝရှိတယ် ဆိုတာ၊ သူတို့နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲတွေ အဖေ အမေတွေ ပညာရှင်တွေ စိတ်ကူးယာဉ်ခဲ့လို့ စည်းစနစ်တွေလိုက်နာခဲ့ကြလို့ သူတို့လူမျိုးမျက်နှာမငယ်ရတာ
ကိုဇော်မျိုးရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကို ကျနော်စိတ်ဝင်စားတယ် ဒါကြောင့်လဲကျနော့် အမြင်တွေကိုဆွေးနွေးနေတာပေါ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံကောင်းရာကောင်းနိုး အလေးထားဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာ
အဲလို လုပ်ရပ်ကို လုံးဝ ဆန့်ကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း အမုံန်းပွားအောင် လုပ်လို့ ဒီမိုကရေစီရလာမယ်လို့ ထင်နေတာ အရမ်းကို မှားနေသလို အဆင့်အတန်းလဲ နိမ့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျနော်တို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မနှစ်သက်ကြောင်း ပြောခွင့်ရှိတယ်ဆို တစ်ချက်တော့ သတိထားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုလိုပြောရချင်းဟာလည်း စာကြောင်းတချို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံသလိုမျိုး အဓိပါယ်သက်ရောက်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ နအဖ ပြုတ်ကျရေးအဆိုတင်သွင်းတုံးကလည်း ဒီမိုကရေစီ ဘက်ကျနော်တို့ရောက်သွားတယ်လို့ ယူဆနေသူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ( ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ကို အထင်ကြီးတဲ့ သူထဲမှာ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် မပါပါဘူး။ နအဖ စီးပွားရေး မလုပ်တတ်လို့ ရာထူးက ဆင်းသင့်တယ်လို့ပဲ ယူဆထားတဲ့သူတွေပါ။ ) ဒါကြောင့် အခုအချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံတယ်လို့ မမြင်အောင် ပြတ်သားစွာကြေငြာချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မနှစ်သက်လို့ မနှစ်သက်ကြောင်း အမှန်အတိုင်းထုတ်ဖေါ်တာကို စစ်အစိုးရနဲ့ တူတယ်လို့ စွပ်စွဲချက်ဟာ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းမကျဘူးဆိုတာကိုတော့ သတိရှိစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျနော်တို့ ဆောင်းပါးကို လက်တွေ့မှာ အသုံးချလို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ တင်ပြချက်ကို လုံးဝ သဘောတူပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ နအဖ အပြစ်ကိုတာ တင်ပြ ဝေဖန်ချင်းပဲ လုပ်ရဲကျပါတယ်။ တကယ်တမ်း ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ရဲ့ အနှစ်သာရဟာ ဝေဖန်သူတွေ တင်ပြလာတဲ့ အပြစ်တွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို ပြင်ဆင်ချင်းအားဖြင့် တိုးတက်လာမယ်လို့ ယူဆကျပါတယ်။ အဏာရှင် စံနစ်တွေမှာတော့ ဝေဖန်တဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ သူတို့ကို စော်ကားတယ်လို့ ယူဆကျပါတယ်။ ဝေဖန်မှုဟာ သူတို့အဖွဲ့ အစည်းကို ပြိုကွဲစေတယ်လို့လဲ ယူဆကျပါတယ်။ ဒါကို ကြည့်ရင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့တွေ ဟာ နာမည်ပဲ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင် စစ်စစ်များသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ ဒီမိုကရေစီလိုချင်ရင် အနီးဆုံးရန်သူကို ချေမှုံန်းရမယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့အညီ နအဖက ဒုတိယအဆင့်မှာမှ တိုက်ခိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အမည်ခံပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာနေသူတွေ၊ အာဏာရူးတွေနဲ့ စီးပွားရှာနေသူတွေကို ဖေါ်ထုတ်ပြီး ရှင်းလင်းပြစ်ရပါမယ်။ အဲလိုမှ မလုပ်နိုင်ရင် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေဟာ နအဖ ပြုတ်ကျရေးလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ ကျနော်တို့ ဆောင်းပါးဟာ လက်တွေ့ မကျဘူးဆိုတာ လုံးဝ မှန်နေပါတယ်လို့ ထောက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျနော်တို့ လေးစားတဲ့အနေနဲ့ အချက်တစ်ခုချင်းဆီကို ပြန်ဖြေပါမယ်။
(၁) ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ မုံန်းတီးမှုလို့ ပြောမယ်ဆိုရင် လုံးဝ မှန်ပါတယ်။ အဲဒါအဓိကအချက်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူဟာ သာမာန်မိန်းမ တစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သမီးပါ။ စာလည်းတော်ပါတယ်။ ရုပ်ရည်လည်း အရမ်းချောမောလှပပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀ အကြာမှာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကို လက်ထက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ရပ်ဟာ မြန်မာပြည်သူတွေကို အရှက်ရစေပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် ပြည်သူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို တစ်ချက်လေးမှ မထောက်ထားဘူးလို့ ယူဆမိပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ဖခင်ကို ကြည် ညိုမှု လျော့နည်းသွားမယ်ဆိုတာ သတိထားသင့်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပြည်သူ့နဲ့ ဖခင်ကို မငဲ့ညှာတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်လို့ မြင်ပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီး ကျနော်တို့ လူထုခေါင်းဆောင် မဖြစ်ထိုက်ပါ။ သာမန် ကျနော်တို့ ဆွေမျိုးတွေထဲမှာတောင် မိဘအတွက် ချစ်သူကို လက်မထပ်ပဲ အပျိုကြီးလုပ်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုပ်ရပ်ဟာ သာမန်မိန်းမတွေမှာ ရှိတဲ့ အရည်အချင်းမျိုးတောင် မရှိလို့ ယူဆပါတယ်။ အစ်ကိုတို့အနေနဲ့ ဒီခေတ်မျက်စိနဲ့ ကြည့်ပြီး ခွင့်လွှတ်နေတာထက် သူလက်ထပ်တဲ့ အချိန်က လူဘောင်ပေတံနဲ့တိုင်းကြည့်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
(၂) ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ဟာ လိမ်ညာထားလို့ အကောင်းမြင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြောကြားချက်တိုင်းမှာ အထောက်အထားတွေနဲ့ ပြောဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီဝါဒကို မျက်ကန်းအထင်ကြီး လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးဘယ်တော့မှ လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ David Irving ကို အစ်ကိုက ဘာဖြစ်လို့ အဆိုးမြင်တာလဲခင်ဗျာ။ သူ့အနေနဲ့ ဂျူးတွေကို နာဇီသတ်တယ်လို့ သူ့မယုံကြည်လို့ မယုံကြည်ဘူးပြောတာ အပြစ်တင်ရင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကို ပိတ်ပင်ရာ မရောက်ဘူးလားခင်ဗျာ? ကျနော်တို့ကို ထင်သလို ထင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါ အစ်ကို့ လွတ်လပ်ခွင့်ပါခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့လဲ ထင်သလို တင်ပြခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒါလဲ ကျနော်တို့ လွတ်လပ်ခွင့်ပါခင်ဗျာ။ အစ်ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကျနော်တို့ လေးစားသလို၊ ကျနော်တို့ လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်း လေးစားပေးပါခင်ဗျာ
(၃) ကျနော်တို့ အတွင်းစိတ်ကို အစ်ကိုမသိတာ မှန်ပါတယ်။ အစ်ကိုအနေနဲ့ တခြားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အတွင်းစိတ်ကိုလဲ မသိပါ။ ဘုရား၊ ရဟန္တာတွေပဲ သိနိုင်ပါတယ်။ အစ်ကိုအနေနဲ့ ဘုရားဟောသလိုပဲ ကိုယ်ပိုင် ဥာဏ်နဲ့ တွေးခေါ်ပြီး ဖြစ်နိုင်လားဆိုတာ စဉ်းစားပါခင်ဗျာ။ မျက်ကန်းယုံကြည်မယ်၊ မျက်ကန်းဆန့်ကျင်မယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ မဖြစ်ထိုက်ပါခင်ဗျာ
ကျနော်တို့ အနေနဲ့ စစ်အဏာရှင်ကို ပြုတ်ကျဖို့ တစ်ခုတည်းအတွက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်မှန်သော အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ နေရာတိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါမှသာ ကျနော်တို့တိုင်းပြည် တိုးတက်လာမှာပါခင်ဗျာ
အစ်ကိုဟာ ဒီမိုကရေစီသမားထဲမှာ ရှားပါးတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။ မတူညီတဲ့ အမြင်ကို လက်ခံဆွေးနွေးတဲ့ အကျင့်ဟာ ဒီမိုကရေစီသမား အများစုမှာ မရှိပါခင်ဗျာ။ အများစုက အကြောင်းအရာ တစ်ခုပေါ်မှာ ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ထက် ယုံကြည်ချက် ခိုင်မြဲတယ်ဆိုပြီး မျက်စိအတင်းမှိတ်၊ နားအတင်းပိတ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဖက် အမြင်ကို ၀င်မလာအောင် တားဆီးကျပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ အမြင်ဘာလဲ ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ တောသား နှစ်ယောက် အမြင်မှာ လက်တွေ့ကျတဲ့ အမြင်ဆိုတာ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ဝေဖန်စမ်းစစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ တကယ်ရမယ် (ဒါမှမဟုတ်) ရဖို့ အထောက်အကူပြုမယ်ဆိုမှ လုပ်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စိတ်ကူးပေါက်တိုင်း လုပ်တယ်ဆိုရင် စိကူးယဉ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားချက်ရှိတိုင်းလိုက်လုပ်တယ်ဆိုရင် ကလေးငယ်တွေလို့ပဲ ပြောရပါမယ်။ မြန်မာဒီမိုကရေစီသမားတွေ လှုပ်ရှားမှုကို အစ်ကိုနားလည်အောင်ပြောရရင် ပုံတူကူးလှုပ်ရှားမှု လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သမိုင်းစာအုပ်တွေထဲမှာ ရေးထားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တွေ လှုပ်ရှားမှုကို ပုံတူကူးပြီး လိုက်လုပ်ကျပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ အသစ်ထွင်တာ မရှိသလို၊ လုပ်သင့်မလုပ်သင့်ဆိုတာလဲ စဉ်းစားဝေဖန်တာတွေ မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။
နောက်ပြီး အစ်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာ ရှေ့နောက်မရှိတဲ့ အချက်ရှိနေပါတယ်။ အပေါ်ဘက်မှာ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေ လုပ်ရပ်တိုင်းကို ထောက်ခံထားပါတယ်။ ဒီတော့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာလဲ ပါမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အောက်ဘက်မှာကျတော့ “စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတယ် ကျောင်းစရိတ် ကြီးတယ် ကျောင်းမနေနိုင်တာက အစ။” လို့ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီလို ပြဿနာတွေ ပိုကြီးလာအောင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုက အားပေးထားတယ်ဆိုတာ အစ်ကို သတိထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စက်ရုံတွေ ပိတ်လို့ အလုပ်သမားတွေ ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာ သတိရပါခင်ဗျာ။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဆိုတာလဲ အတုခိုးထားကျတာ မဟုတ်လားခင်ဗျာ။ တကယ်တမ်း မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် အထောက် အကူပြူရဲ့လားဆိုတာ စမ်းစစ် ဝေဖန်တာမျိုး မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုကတော့ အစ်ကိုတို့ဟာ Double Standard လုပ်ကျပါတယ်။ နအဖ စစ်တပ် မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ စစ်တပ်တိုင်းမှာ လက်နက်အားကိုးပြီး အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက် မုဒိမ်းကျင့်တာတွေရှိပါတယ်။ အစ်ကိုကတော့ ပြောမယ် နအဖ စစ်တပ်က ပိုဆိုးတယ်လို့! မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ မြန်မာစစ်တပ်ကို သိက္ခာကျအောင် ဒီမိုကရေစီသမားတွေ သတင်းလိမ်တွေ လုပ်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ တစိပ်ကို တအိပ်လုပ်ပြောတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဖြစ်ပျက်မှုတွေရဲ့ အဓိက တရားခံဟာ ပြည်တွင်းစစ်လို့ မြင်ပါတယ်။ စစ်ဖြစ်ရင် အဲဒါတွေရှိနေမှာပါ။ ဘယ်နိုင်ငံမဆို အဲလို ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး နအဖဟာ လူသတ်တဲ့ နေရာမှာ အမေရိကန်အစိုးရ ထက်အများကြီး တော်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ အဓိက ရန်သူဟာ အမေရိကန်အစိုးရပါ။ သတင်းဌာနတွေက ၀ိုင်းပြီး ဖုံးဖိထားလို့ အမေရိကန်အစိုးရ လူသတ်မှုတွေကို ကမ္ဘာက မသိဖြစ်နေတာပါ။ ကျနော်ပြောတ ဟုတ်မဟုတ် အချိန်ရရင် လေ့လာကြည့်ပါခင်ဗျာ။
ကျနော်တို့ အနေနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ကမ်းလှမ်းလာတာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ဟာ ဒီမိုကရေစီ ၀ါဒကို စွဲကိုင်ထားသူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ သတိထားစေချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အတွက်လုပ်နေကျတာပါခင်ဗျာ
We already have sasana organization. They can voice out as they have influential power on different groups. And What about NCGUB?
I respect any democracy activists whoever whatever however. At least they do something. Do something is better than nothing. Ahhh much much better than disgusting people ( like bogus asylum, take all advantages and do not respect the host country at all )
ဒီမိုကရေစီနာမည်ခံတာနဲ့ မထောက်ခံသင့်ကြောင်း ဆောင်းပါးမှာ ရေးထားပါတယ်။ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ။ နောက်ပြီး ကျနော်နဲ့ အစ်ကိုမောင်ဆန် ကနေဒါမှာ ဒုက္ခသည်ဟုတ်မဟုတ် အရင်စုံစမ်းပါဦးခင်ဗျာ။ အစ်ကိုမောင်ဆန်နေတာက Niagara မြို့လေးမှာပါ။ ကျနော်က Toronto မြို့နားမှာပါခင်ဗျာ။ မြန်မာပြည်မှာလဲ တောမှာပဲ မွေးခဲ့ပြီး အခုလဲ ချောင်ကလောင်ထဲမှာနေကျပါတယ်ခင်ဗျာ။ မသေချာပဲ စောင်းမြောင်းပြောတာမလုပ်သင့်ပါခင်ဗျာ။ မသေချာရင် လူကျင့်ဝတ်နဲ့ အညီ အာမချောင်သင့်ပါခင်ဗျာ။
Don't angry i just want to clarify my doubt. i got one point from you that you are not asylum/refugee. So we can continue our discussion probably we have different view how to achieve prosperous Myanmar.
Otherwise i do not spend my precious time for those disgusting people ( I mean bogus, lie to host country and support general to live long on power )
Finally i am Ms not Mr. See you again oun your blog
I respect ur right to disagree on DASSK , but from my view, when it come to talk aboutaleader's personal life, we should be focus more onacountry's fate and country's developing , rather than just stick with personal life. I don't think it isarelevant issue to bring in. Be open minded and think beyond personal issue.
I do not say i agree/support all democracy activists and their idea. But i respect them compared to such such thoes people.
ကျနော်အနေနဲ့ မှားပြီး အစ်ကိုတပ်ခေါ်ခဲ့တာ ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ။ အစ်မ comment ပေါ်မှာ ကျနော့အမြင်လေးကို ပြောချင်ပါတယ်။ အစ်မအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီသမားတွေကို နအဖနဲ့ ယှဉ်ရင် ပြီးပိုလေးစားတယ်ဆိုတာ ၀ါဒတူလို့ လေးစားတယ်လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားမနာတမ်းတွေးပါခင်ဗျာ။ ဒီကနေ့အထိ ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ နအဖထက် နိုင်ငံကို ပိုချစ်ကြောင်း သက်သေကျနော်တို့မမြင်ရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ သူတို့တွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်တာ၊ ဆဲတာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်တဲ့ အရေမရ အဖတ်မရ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူတွေပါခင်ဗျာ။ လက်တွေ့ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိအောင် လုပ်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မတွေ့ပါခင်ဗျာ။ တကယ်လို့ သူတို့ အနှိမ်ခံရလို့ မိန်းခလေးပီပီ သနားတဲ့ စိတ်အခြေခံပြီး လေးစားတယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့ခင်ဗျာ။
အစ်ကိုရေ စကားဆိုတာ လှည့်ပတ်ပြောနေတာထက် တည့်တည့်ပြောတာက ပိုသင့်တော်တယ် ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာ ကျနော်ရဲ့ ရေးသားချက်ကို အစ်ကို မနှစ်သက်ပါဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောစေချင်ပါတယ်။ ကျနော် ဆောင်းပါးထဲမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုလုံးဝ မလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ အောင်ဆန်းစုကြည်လို့ ရိုင်းရိုင်းခေါ်ပြီးလဲ ခွေးနဲ့ မနှိုင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း ရေးပြတယ်ဆိုတာလဲ Comment မှာ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို ပြန်ဖြေတဲ့သဘောပါ။ ရိုးသားစွာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်တာ မှန်ကန်တယ်လို့ မထင်ရင် ဒီမိုကရေစီသမားတွေ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်တာကို အရင်ပြောသင့်တယ်ဆိုတာ ကလေးတောင် သိပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အမြင်ကို တဖက်လှည့်ပြီး တားမြစ်နေတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။
ဟီးဟီး၊ တော်တော် ရီရတဲ့ ပို့စ်ပဲ။ ဇော်မျိုး တစ်ယောက် အဲဒီလောက် ဟာသဥာဏ်ရွှင်မှန်း အခုမှ သိရတော့တယ်။
ရီစရာ ပို့စ်တွေ အတော်များများ ရေးတတ်သားဗျနော်။ ဆက်ရေးပါဦး အားပေးနေပါတယ်။
နေကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ စာမေးပွဲတွေကြောင့် အရေမရ အဖတ်မရ အတင်းတုတ်သမားတွေကို မကလိဖြစ်တာ ကြာသွားပါတယ်။ ကိုကဒေါင်းကြီးကတော့ comment လဲ ပိတ်လိုက်ရှာပြီဗျ။ နောက်ဆုံးတော့ အဖြူပြောသမျှ ယုံတယ်လို့ ပြောပြီး အခုလို ကြောက်ချေးပါသွားတာပဲဗျ။ (ကြောင်ချေး ထက်ပိုဆိုးတဲ့ ကြောက်ချေးပါ) သူ့ကို မြှောက်တဲ့ comment ဆိုရင်တော့ လက်ခံမယ့် အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ အစ်ကိုမောင် ဆန်ပို့ထားတဲ့ ဆောင်းပါး နှစ်ခုလောက်တော့ တင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
အဲဒီအထာတွေတော့ လာမလုပ်နဲ့ဗျ။ ဒီမိုကရေစီသမားတွေကို မဝေဖန်အောင် အောက်တန်းကျကျ ဆဲကျတယ်။ မရတော့ ချိမ်းခြောက်ကျတယ်။ ချိမ်းခြောက်လို့မရတော့ ရူးသလိုလို ပေါသလိုလိုနဲ့ စာဆက်မရေးချင်အောင် လုပ်တယ်။ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တယ်ဆိုတာ နအဖပဲ ဝေဖန်ရမယ်လို့ မသတ်မှတ်ထားဘူးလေဗျာ။ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့်နဲ့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ရေးထားတာ ဝေဖန်မယ်ဆိုရင် ကြိုဆိုပါတယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ပဲ အရေမရ အဖတ်မရ စိတ်မနှံ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီသမား အထာလာချိုးရင် နောက် comment တွေကို ဖျက်ပြစ်ပါမယ်။ အဆင့်အတန်းနဲ့ရေးရင် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါမယ်။ မတူမတန်လို့ ဆီပုံးကို Lock လုပ်တာ သတိထားပါဗျာ။ တောမှာ မွေးပေးမယ့် ဒီမိုကရေစီသမားတွေလောက်တော့ အချင်ပဲဗျ။ ခပ်နိမ့်နိမ့် ကစားကွက်လေးတွေ မသုံးပါနဲ့ဗျာ :D
ဒါဟာ ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး သတိပေးခြင်းပါခင်ဗျာ။
ဇော်မျိုး (တောသား တစ်ယောက်)
Have you read the post from Tharkinwe blog. I want to know what he saying is true. All Burmese Buddhist monk in foregin are CIA followers and who living through CIA support. If it is true, it isareal sad for me and Buddhism. As far as I know all Burmese monks in US are member of Monk organization. I know some monk personally. They are educated, discipline and follow Buddha ways. They don't look like CIA followers. They are doing here for buddhsim. If you know anything about this, please write some post because this is our religion. If we are real buddhist, we have to protect Buddhism. It is better than critising foregin media and so called Democracry
I reply this comment base onacondition that i believe you,me and we all haveacommon interests on our country's development and saving our country's image back.
I tell u frankly, first , u didn't get my point. Second ,how is DASSK's marriage link to our country's development,and should marriage be that matter for beingaleader? Try to look out other countries. How about india ? Rajiv Gandhi marry to italian woman Sonia Gandhi, now even she became chairman of congress party. So do in our country , as long as people support DASSK , she deserves that leadership position. 1990 election proved it. I'm not trying to convince u to believe in what i said. I do respect ur right to dislike her , so do i have my right to disagree with u and show my opinion .
အစ်ကိုအနေနဲ့ သတင်းဌာနတွေကို ဝေဖန်နေတာထက် ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ဆောင်းပါးရေးဖို့အကြံပြုချက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ နိုင်ငံရေးနှစ်ဖွဲ့ကြားမှာ လွဲမှားစွာ အသုံးပြုချင်းခံနေရတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ နအဖ ဘက် တစ်ခုတည်းသာ မဟုတ်ပါဘူး ဒီမိုကရေစီဘက်ကလဲ မိမိဝါဒကို လက်မခံတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေအပေါ်မှာ စော်ကားတာတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်တာတွေ ရှိနေပါတယ်။ နှစ်ဖက်စလုံး အပြုအမူကို မကျေနပ်ပေမယ့် သည်းခံရုံနဲ့ ဥပခါ ပြုရုံကလွဲလို့ ဘာမှ မလုပ်သင့်လို့ယူဆပါတယ်။ အရေးကြီးတာက နိုင်ငံရေးပြဿနာကို အဖြေရှာနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်လာအောင် ဖန်တီးနိုင်ရင် အခုအခက်အခဲတွေအလိုအလျှောက် ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျနော်တို့တောသားနှစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အရမ်းမုံန်းပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်လည်း လက်မခံပါဘူး။ အဲလို လက်မခံဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့ စိတ်ထဲကပါ။ တကယ်တမ်း နိုင်ငံအတွက် လိုအပ်ရင် သူ့ကို အလေးပြုသင့်ရင် ပြုပါမယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် သူ့ကို ဆဲမှ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဆဲပါမယ်။ အဲဒါဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ သဘောထားပါ။